Articles Archives - Page9of 85 - Popular
မြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းထဲမှာ လူငယ်တွေအတွက် သတင်းအချက်အလက်က မရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကို ရောက်လာပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြန်မြန်သိနိုင်တဲ့သူက ဦးဆောင် နိုင်သူဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေမှာ လူငယ်တွေ သူတို့သိချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဘယ်ကယူနေသလဲ၊ ဘယ်လိုရှာဖွေကြလဲ၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လူငယ်တွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ထင်သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်း…
တွံတေးသီချင်းတွေကို မန်ကျည်းပင်ထိပ်တတ်ပြီး အသံကုန်ဖွင့်ကြတာဆိုတော့၊ စာပေပွဲ ဘာမှလုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီအခါသက်ကြီး ဝါရင့်ဆရာဗိုလ်ဗကိုက တွံတေးသိန်းတန်ကိုခေါ်ပြီး . . .
''အို မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင် ဆဲ ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ''ဟု တုန်ရီ သောအသံဖြင့် မောင်ကျောက်ခဲခမျာ တုန့်ပြန်ခဲ့ရပါလေသည်။ တကယ် တော့ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု အကဲဖြတ် အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရသည်မှာ လွယ်လှ သည်တော့မဟုတ်။ မဂွမ်းပုံ ပြောသ လို...
ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ စိတ်ခံစားချက်ကို သိပ်ရှေ့တန်းတင်လို့ မရဘူး။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းက ဒီလိုရှိတယ်။အဲဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်းပဲဆရာတို့က သွားရမှာလေ။ နောက်လူတွေအတွက် ပိုကောင်း သွားရအောင်ပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ဒီဆုကလည်း ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးရှိသွား အောင် သိက္ခာရှိသွားအောင်ပေါ့ လေ'လို့ အကယ်ဒမီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့...
ကဗျာကို ဘယ်လိုဆက်လက် ရေးသွားကြမှာလဲ။ ကျွန်တော်ဖြင့် စိတ်ဓာတ်များတောင် ကျမိပါတယ်။ ကဗျာထဲမှာ မရည်ရွယ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် တွေက အရင်ရောက်နှင့်နေပြီး ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ကို မဆုံး နိုင်လောက်အောင် စမ်းသပ်နေပါတော့ တယ်။ ကဗျာမပါတဲ့ လူမှုဘဝဆိုတာ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကဗျာ…
ဆရာရွှေပြည်အေး၏ ငယ် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆရာစောင်းဦး ဘသန်းက သူ၏ဂီတနှင့် ဘဝအတွေ့ အကြုံစာအုပ်တွင် ဆရာရွှေပြည်အေး ငယ်စဉ်က စကားထစ်ပုံကို မှတ်တမ်း တင်ရေးသားခဲ့ရာ၌လည်း မောင် အေးသည် ငယ်စဉ်ကပင် စကားထစ် လေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် သီချင်းဆို…
တစ်ခါတော့ အလုပ်အပ် ထားတဲ့ ထုတ်ဝေသူတစ်ယောက်က စိတ်မရှည်တော့ဘဲ စောင့်ရတာကြာ လွန်းလို့ မောင်အောင်ဗလရဲ့ အလုပ် ခန်းနံရံမှာ 'ကမ္ဘာကြာ မောင်အောင် ဗလ'ဆိုပြီး စုတ်တံနဲ့ စာရေးပစ်ခဲ့ဖူး တယ်...
'တုံးယိမ်းအက'ကပြတဲ့အခါ လူငယ်အယောက် '၆ဝ'ကနေ '၁ဝဝ'အထိ ပါဝင်ရပြီး၊ ၂ တန်း၊ ၄ တန်း စသဖြင့် အတန်းခွဲကာ ကကြရပါတယ်မြန်မာယိမ်းတွေလိုအမြိုင်တီးကွက်ကို အခြေခံလို့ ယိမ်းတီးလုံးနဲ့ တေးသွားအလိုက် စီစဉ်ကပြသွားကြပါတယ် . . .
မေရီ့ယောက်ျားဟာ မီလျံနာသူဌေးကြီးဖြစ်ပေမယ့် သူ့လုပ်ငန်းတွေအတွက် အမြဲပူပင်ရတယ်။ ငါ ...သူဌေးဆိုတဲ့ မာနနဲ့ ဒေါသ ကြီးတယ်။ တစ်ဖက်သားကို အနိုင် ယူချင်တယ်။ နှမြောတယ်။ ဇနီးမယားကို ချောင်ထိုးထားချင်တယ်။...